Ny Dell XPS 13 vaovao dia hanana maodely "rose gold" | Vaovao momba ny gadget
Dell dia manohy miloka amin'ny findainy XPS isan-karazany ary izao efa nikitika ny fanavaozana dia mihodina amin'ny Xps 13 malaza. Ity solosaina finday ity dia natomboka ho mpifaninana henjana amin'ny Macbook Air, mpifaninana izay miaraka amin'ny fanavaozana farany dia tsy ny fahatratrarana solosaina finday an'i Apple ihany fa amin'ny lafiny famolavolana.
Ny vaovao Dell XPS 13 dia hanasongadina ireo processeur Intel vaovao fa koa amin'ny fahafaha-misafidy azy amin'ny loko «rose gold», loko mitovy amin'ny macbooks farany, manana endrika tsara ihany koa noho ny haitao apetraka amin'ny efijery misy azy, efijery tsy misy sisin-tany.
Ny Dell XPS 13 vaovao dia hanasongadinana ireo processeur an'ny Intel manaraka, RAM (azo ovaina) betsaka ary efijery avo lenta. Fa hisy ihany koa seranan-tsambo thunderbolt 3 izay, ankoatry ny zavatra hafa, dia hamela ny solosaina findainy hanana efijery mpanampy. Ny fizakantena dia miaraka amin'ny famolavolana iray amin'ireo teboka matanjaka indrindra amin'ity maodely vaovao ity, mahatratra mihoatra ny 22 ora ny fizakantenam-panjakana raha ny fampiharana fampiharana ary hatramin'ny 13 ora amin'ny fitetezana tranonkala, izay tsy very ny refy sy ny lanjany ambany, zavatra iray izay nampiavaka ity maodely Dell ity hatrany.
Ny Dell XPS 13 vaovao dia hanasongadina seranan-tsambo Thunderbolt 3 ho fanampin'ny efijery mikasika
Na izany aza, ny Dell XPS 13 dia tsy nalaza tato ho ato noho ny volavola volamena misy azy na noho ny fananana ny processeur Intel farany indrindra fa noho ny maodely voalohany, ny maodelin'ny Developer dia ny laptop ampiasain'ny guru Linus Torvalds, tranga iray izay nahasarika ny sain'ny olona liana maro.
Toy ny sisa amin'ny solosaina Dell, ny Dell XPS 13 vaovao dia hanana mpanonta malaza izay hamela ny mpampiasa hisafidy singa sasany amin'ny solosaina findainy, dia ny 799 $ base base ary afaka mahatratra 1.300 dolara raha misafidy ny safidy premium rehetra.
Ny Dell XPS 13 dia nihatsara tokoa, manome famolavolana tsara noho ny loko volamena vaovao, loko izay tsy tiako manokana fa tsy mijanona ny fametahana tsara ny tsipika famolavolana ny Dell XPS 13 Tsy mieritreritra ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » solosaina » portable » Ny Dell XPS 13 vaovao dia hanana maodely "rose gold"
Ny Amazon Echo Dot vaovao dia efa zava-misy